Qingdao Huaxin Group Co., Ltd iri riri kumavirira guta indasitiri Park, Jiaonan, Qingdao guta, pedyo-mukoto matatu mugwagwa pamwe mamita 100 kure, Jiaoji njanji, liuting yendege dzakawanda, aichimbova Bay chikepe, nyika uye gungwa uye mhepo zvifambiso Links , nyore chaizvo nzvimbo.
The kambani rakaumbwa muna 1998, ari pamwe pamasikiro uye kugadzirwa, kugadzira, kugadzwa, rokutengesa uye basa muvengi emakambani kuti dzinoshanda pamwe chete. Kudzingwa atanga kuumba epamba kugadzirwa umbowo michina michina. Company kunyanya zvekushandisa mudonzvo, mamaneja uye vashandi workshop vane makore anopfuura gumi okuwana zvakaitika kutsinga indasitiri kwemichina.
(A) QXY dzakatevedzana simbi yairema, profile akapfurwa Nokufema muchina zvakachena-kumusoro, Q32 yakawana akapfurwa Nokufema dzakachena-up muchina, Q37 akatevedzana haka mhando airless akapfura kwebhosvo rokuchenesa muchina, Q38, Q48 akatevedzana cheni akarembera akapfura Nokufema dzakachena-up muchina, Q69 yaitevedzana njanji simbi ndiro, mamiriro akapfurwa Nokufema rokutsvaira muchina. Q35 turnable mhando, Q76 akatevedzana bara kwebhosvo dzakachena-up muchina, QGW akatevedzana simbi mutopota rwokunze dzakachena-up muchina, Q31 drum-mhando dzakachena-up muchina, S11series jecha chisanganiso.
(B) richigadzirisa muchina: Z143 series, Z145 series, Z146 series, Z148 akatevedzana
Core kupfura muchina: Z86series, ZHTO600 / 700, ZH87series, Z94 akatevedzana
Shell makirisito muchina: Z95 dzino
(C) The wegore kugadzirwa inokwana 3000 kusvika 10000 matani akatevedzana nebwe-waakaita jecha, ivhu jecha dzaFord.
(D) basa chaiwo zvinodiwa vanoshandisa siyana dzakachena-up of jecha nokubikwa michini uye zvakasiyana-siyana zvokuimba design, kugadzirwa.
The kambani simba zvekushandisa simba, yepamusoro kugadzirwa michina, kuonekwa akakwana zvinoreva yezvesayenzi utariri maitiro uye kunyatsoomerera yepamusoro vimbiso hurongwa maererano dzakawanda zvinodiwa kumhanya.
Boka redu kuomerera "kutendeseka + yepamusoro + utsanzi + basa" yokutengesa pfungwa, yepamusoro kugadzirwa michina, kunyatsoteerera unhu zvinodiwa, yakazara siyana kudzora zvakanaka uye. Market -oriented mukurumbira, basa nomwoyo wose sezvinoita chokuratidza.
The kambani tsvimbo vose vanogamuchira vanhu vanobva pasi pose kubatana, kugamuchira zvitsva nezvitsaru vatengi vauye uye kutungamirira basa.